Ahoana ny fomba nanovan’ny mpampianatra Indiana iray ny fako plastika ho lalambe · Global Voices teny Malagasy
Ahoana ny fomba nanovan'ny mpampianatra Indiana iray ny fako plastika ho lalambe
Voadika ny 26 Avrily 2018 11:21 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, Português, Deutsch, عربي, 日本語, русский, हिन्दी, 繁體中文, اردو, বাংলা, नेपाली, Nederlands, Italiano, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, English
Ity lahatsoratra nosoratan'i Todd Reubold ity dia navoaka voalohany tao amin'ny Ensia.com, gazetiboky iray izay manasongadina ny famahana ny olana iraisampirenena momba ny tontolo iainana, ary naverina navoaka eto indray ho ao anatin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Iray amin'ireo olana lehibe atrehan'izao tontolo izao ny fandotoan'ny plastika. Vao tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny lahatsoratry ny mpahay siansa tao amin'ny gazety Scientific Reports fa ny lanjan'ny fako any amin'ny Faritra Lehibe Natokana ho an'ny Fako any amin'ny Pasifika dia inefatra ka hatramin'ny in-16 avo heny mihoatra izay iheverantsika azy.
Midika izany rehetra izany fa tena manan-danja hatrany tokoa ny fitadiavana ny fomba mba hanodinana indray sy hampiasana indray ny fako plastika.
Indro ary i Rajagopalan Vasudevan, mpampianatra ao amin'ny Kolejin'ny Injeniera Thiagarajar ao Madurai, India . Rehefa nahita izy fa olana goavana manerana ny firenena ny fako plastika, dia namolavola fomba iray hanodinana ny fako plastika potipotika ho làlana malefaka sy maharitra :
Rehefa nanomboka ilay asa aho, dia nisy orinasa maromaro tany Etazonia nahafantatra izany ka nanolotra vola be ahy izy ireo. Tiany ny hanomezana azy ireo ilay teknolojia, saingy tsy nanaiky izany aho, tsy manome amin'ny fomba toy izany izahay. Omeko maimaimpoana ho an'ny fireneko izany.
Amin'izao fotoana, làlambe an'arivony kilaometatra any India no nampiasana ny teknolojia noforoniny, ka nampihena ny habetsahan'ny fako plastika izay mety ho ariana any amin'ny tontolo iainana:
Misy lalana mirefy 41 lakhs (4,1 tapitrisa) kilaometatra ao India, 1 lakh ihany anefa no efa nametrahana izany. Mbola mila atao ireo lalana hafa . Izany no mpanetsika amin'ny asa iray manontolo.
Seth Coleman, ilay mpanatontosa horonantsary monina any Budapest, Hongria no nanatontosa, nanapika sy nanitsy ity lahatsary ity.
Ny Torolalana indiana 2022 fahazoan'ny Fampitam-baovao fankatoavana
Sri Lanka 4 herinandro izay